जाडोमा हृदयघातको जोखिम बढी, कसरी बच्ने ? यस्ता छन् लक्षण र उपाय « Lokpath
जाडोमा हृदयघातको जोखिम बढी, कसरी बच्ने ? यस्ता छन् लक्षण र उपाय
काठमाडौं । गर्मीको तुलनामा जाडोमा हृदयघातको जोखिम बढी हुने गर्दछ । विशेषज्ञहरुका अनुसार गर्मीमा भन्दा जाडोमा हृदयघात हुने सम्भावना ५३ प्रतिशतले बढी हुन्छ । जाडो मौसमको बिहान ४ बजे देखी ५ बजेसम्म हृदयघातको खतरा धेरै हुन्छ । चिसोको कारण शरीरमा नसा साँघुरिँदा मुटुमा कार्यभार बढी हुने र यसले हृदयघात अर्थात हर्टअट्याक हुने सम्भावना बढ्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
चिसोले हुनसक्ने हाइपोथर्मियाले शरीरको तापक्रम सामान्यभन्दा तल झार्छ र शरीरले चाहिने मात्रामा ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्दैन जसका कारण हृदयघातको सम्भावना हुन्छ । जाडो मौसममा हृदयाघात हुनुको अर्को कारण घाम नलाग्ने र भिटामिन डीको कमी हुनु पनि हो । भिटामिन ‘डि’ले रक्तनलीलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ ।
पछिल्लो समयमा हृदयघातबाट हुने मृत्यु संसारभरी बढेको छ । अझै युवा अवस्थाका मानिसहरुमा समेत यो समस्या व्यापक रुपमा देखिन थालेको छ । आजकाल मानिसहरुको अस्तव्यस्त जीवनशैलीले गर्दा हृदयघातको जोखिम बढ्दो छ । खानपानमा ध्यान नदिनु र आवश्यक शारिरिक व्यायमको नगर्नु त्यसैगरी प्रदुषित वातावरण हृदयघातको प्रमुख कारण हो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)को तथ्याङ्क अनुसार दक्षिण एशियामा २७ प्रतिशत मानिस हृदयघातका कारण मर्ने गर्छन् ।
हृदयघात हुनु अघि हाम्रो शरीरमा केही अहसजता र लक्षणहरु देखिन्छन् । त्यस्ता लक्षणहरुबारे सचेत हुन सके हृदयघातबाट बँच्न सकिन्छ । हृदयघात हुनु अघि देखिने लक्षणबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
२. अपच हुनु वा वान्ता हुनु
३. थकान महसुस हुनु
४. छाती वा पिठ्यूँमा अत्यधिक पीडा हुनु
५. सास फेर्न कठिन हुनु
६. टाउको, गर्दन वा दाँत दुख्नु
७. बेचैन हुनु, तनाव हुनु र रिंगटा लाग्नु
८. जोर्नीहरू दुख्नु र साथमा ज्वरो पनि आउनु
९. जिब्रो,औंलाका टुप्पाहरू नीलो हुनु
यदि यस्ता लक्षणहरु देखा परे बेलैमा चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ । मुटुमा समस्या देखिएमा नियमित जाँच गर्नुपर्छ।
१. स्वस्थ भोजन: प्रशस्त फलफूल, हरियो सागसब्जी खानुहोस् साथै चिनी, नून र चिल्लो एकदम कम गर्नुहोस्।
२. नियमित शारिरिक कसरत /व्यायाम गर्नुहोस्: दैनिक रूपमा ३० मिनेट (आधा घण्टा) मात्रै भने पनि व्यायाम गर्नु मुटुको स्वस्थको लागि एकदमै राम्रो हो।
३. धूम्रपान साथै सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन नगर्नुहोस्: सूर्ति / तमाखु, सिगरेट (चुरोट), सिगार अथवा खैनी-सूर्ती स्वास्थ्यको लागि एकदमै हानिकारक हुन्छ। यसको उपयोग नगर्नु नै रोकथामको लागि एकदम उत्तम तरिका हो। त्यसैगरी सेकेण्ड-ह्यान्ड धूम्रपान (अर्थात तपाईको छेउमा रहेर कसैले चुरोट पिउनु)को सम्पर्कमा पर्नु पनि स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ।
४. मुटुका केही रोगहरू जस्तै- उच्च रक्तचाप, उच्च रक्त कोलेस्टेरोल, मधुमेह आदिको कुनै लक्षणहरू नहुन पनि सक्छ। यी रोगहरू परीक्षण गरेपछि मात्र पत्ता लाग्छ। यसकारण मुटुरोगको कुरा गर्दा नियमित स्वास्थ्य परीक्षणलाई धेरै महत्त्व दिइन्छ। मानिसको आकस्मिक मृत्यु धेरैजसो मुटुरोगकै कारणबाट हुन्छ। एजेन्सी
प्रकाशित मिति: २०७६,मङ्सिर,२२,आईतवार १४:३८
पढ्नुहोस् महान दार्शनिक प्लेटोका महान १८ भनाई
विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ ले नेपाललाई पनि उत्तिकै सताएको छ । यतिवेला नेपालका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाहरु कोरोनाका विरामीले भरिएका
यसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ कोरोना नियन्त्रण
सागर सुवेदी पहिलो घटना- काठमाडौंमा बसोबास गर्ने एक मित्रले एक साता अगाडी मलाई कल गरेर आफु कोरोना संक्रमित छु कि
कोभिडको दोस्रो लहर अहिले व्यापक रूपमा फैलँदै गएको छ । कोभिडको पहिलो चरणको सङ्क्रमण बालबालिकामा धेरै नदेखिए पनि अहिले दोस्रो